Boot disk feno amin'ny Mac? Fetsy hanafaka toerana! | Avy amin'ny mac aho
Toy ny fitsipika ankapobeny, ny mpampiasa dia tokony hitahiry zavatra marobe, miaraka amin'ny hadalana raha sanatria ka mila azy io aho indray andro, mandra-pahatongan'ny fotoana iray na Mifindra trano ianao ary miaina ao anaty trano fitahirizana Na manomboka manary izay rehetra noeritreretinao fa mila indray andro any ianao fa rehefa afaka taona maro dia tsapanao fa tsy misy dikany izany.
Raha miresaka ny mafy ataontsika isika, dia hitovy tanteraka ny raharaha. Imbetsaka tamin'ny fotoana iray, nisy antontan-taratasy, sary na horonan-tsary nampitaina taminay ary nalainay tamin'ny solosainay izy ireo tamin'ny fikasana hankafy azy io am-pitoniana, fa crehefa mandeha ny fotoana dia manadino isika ary latsaka ao anaty fanadinoana izy mandra-pahatongan'ny farany dia fisie iray hafa izay maka toerana tsy ilaina amin'ny Mac-nay.
Fa ny zavatra mitovy amin'izany dia mitranga amin'ny sary na horonan-tsary alaina amin'ny Internet, fa indrindra amin'ny horonantsary sarimihetsika. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny haben'ity karazana horonantsary ity dia manodidina ny 2 GB, toerana iray azo zaraina tsy misy olana amin'ny kapila mafy ataontsika, rehefa misy sarimihetsika 2 na 3, fa raha manomboka mamoaka izay rehetra tafiditra ao an-tanantsika havia sy havanana isika, ny kapila mafy ataontsika dia ho lasa korontana amin'ireo rakitra tsy ilaina izay hisy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny Mac.
Amin'ny rafitra fiasa rehetra, torohevitra foana ny hanana toerana malalaka 10% farafaharatsiny mba hiasa mora foana ilay rafitra nefa tsy mampiseho olana amin'ny fahombiazana. Ary tsy ankanavaka ny OS X. Raha mandinika izany ny Mac antsika manomboka mieritreritra zavatra mihoatra ny indray mandeha, tsy maintsy jerentsika ny toerana fitahirizana sy ny fomba fizarana azy hahalalantsika ny hevitra hoe aiza no tokony hampitaantsika ny kifafa. Mba hanaovana izany dia kitiho ny menio Apple > Momba an'ity Mac ity> Fampahalalana bebe kokoa> fitehirizana.
Ity menio ity dia hampiseho amintsika ny fomba fizaranay ny habaka amin'ny Mac: horonan-tsary, fampiharana, sary, feo ary hafa. Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, ny ankamaroan'ny kapila mafy dia horonantsary arahin'ilay tsy fantatra antsoina hoe Hafa, izay sarotra be tokoa ny mamantatra azy ary indraindray tsy azo atao mihitsy. Amin'ity tranga ity, mazava fa raha mila manala toerana amin'ny Mac aho dia tsy maintsy esoriko ny ampahany betsaka amin'ireo horonantsary ireo, na amin'ny alàlan'ny fandikana azy ireo amin'ny kapila ivelany na famafana azy ireo raha tena tsy mila azy ireo aho. .
1 Afaho ny toerana amin'ny kapila mafy Mac anao
1.1 Fafao ny backup iTunes
1.2 Afindra amin'ny kapila mafy ivelany ny fampahalalana
1.3 Fafao ny rindranasa izay tsy ampiasainay
1.4 Esory ireo fiteny efa napetraka
1.5 Inona no ataoko amin'ny toerana iasan'ny "Hafa" amin'ny Mac-ko?
1.6 Fakafakao ny haben'ny fisie ao anaty kapila mangitsokao
1.7 Hamafana ny tantara fitetezana
1.8 Hamafana ny cache an'ny browser izay ampiasainay
1.9 Hamafa ireo rakitra tsy maharitra
1.10 Mitadiava rakitra mitovy dika mitovy
1.11 Zahao ny fampirimana fampidinana
1.12 Ataovy foana ny fako
1.13 Manova kapila mafy
1.14 Tantano ny fitehirizana amin'ny alàlan'ny macOS Sierra
Afaho ny toerana amin'ny kapila mafy Mac anao
Iray amin'ireo tombontsoa marobe omen'ny OS X antsika raha ampitahaina amin'ny Windows, dia ny fizarana Storage izay hitantsika amin'ny fotoana rehetra karazan-tahiry inona no manana toerana malalaka kokoa amin'ny kapila mangarahara, ka raha voalamina tsara ny rakitra rehetra, dia ho vitanay haingana ny hamaha haingana ireo olan'ny habakabaka izay misy fiantraikany amin'ny kapila mafy ataontsika.
Fafao ny backup iTunes
Na dia ny kinova farany an'ny iOS sy iTunes aza dia tsy ilaina intsony ny mampifandray ny fitaovantsika amin'ny Mac saika tsy misy antony, foana ilaintsika ny mampifandray azy io mba hanaovana backup amin'ny fitaovantsika, na iPhone, iPad na iPod touch, nomaniny ho solon'izay ho mora ampiasaina raha toa ka handeha hamaky ny fonja ny fitaovantsika isika na raha hanavao ny kinova maoderina kokoa an'ny iOS aza isika mandritra ny fizotrany dia mety hisy zavatra tsy hahomby ary tsy maintsy hamerina amin'ny laoniny ny fitaovantsika isika avy eo. avereno amin'ny laoniny ny backup miaraka amin'ireo rindranasa sy fampahalalana rehetra izay efa notahirizinay tao.
Misy olana amin'ny fifandraisana Bluetooth an'ny Mac anao?
Raha manana fitaovana marobe isika ireo backup ireo dia mety haharitra gigabytes vitsivitsy. Raha, amin'ny fitsipika ankapobeny, tsy matetika isika no mametraka fametrahana madio isaky ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa izay alefan'i Apple isan-taona, fa manavao azy fotsiny, azo inoana fa nandritra ny taona maro, fitaovana maro no nandalo ny tanantsika ary ny fiarovana ny dika mitovy dia mitahiry ao iTunes. Ny backup tsirairay avy dia afaka mandray gigabytes vitsivitsy, gigabytes izay ahafahantsika manafaka haingana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo kopia nomaniny ho solon'izay sy ny fanesorana ireo nomaniny ho solon'izay fitaovana izay tsy ananantsika intsony.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manokatra iTunes aloha isika ary eo amin'ny menio ambony iTunes tsindrio ny Prefers. Manaraka izany dia mandeha any amin'ny Fitaovana. Amin'ity fizarana ity dia ho hitantsika ireo kopian'ny nomaniny ho solon'izay fitaovantsika. Raha mahita izay tsy ananantsika intsony isika dia mila fotsiny tsindrio eo dia safidio Hamafa ny backup.
Afindra amin'ny kapila mafy ivelany ny fampahalalana
Amin'izao fotoana izao eNihena be ny vidin'ny kapila mafy ivelany tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary amin'izao fotoana izao dia azontsika atao ny mampiditra azy ireo amin'ny latsaky ny 100 euro, amin'ny habe mihoatra ny 2 TB. Ity foana no vahaolana tsara indrindra raha mila miasa matetika miaraka amina rakitra be ianao noho ny asanao ary horonan-tsary azonao esorina izany.
Ny idealy dia ny mamindra azy ireo hatrany amin'ny fiara ivelany rehefa tsy miasa intsony amin'izy ireo izahay ary fantatsika fa mandritra ny fotoana maharitra dia tsy mila azy ireo isika, satria raha tsy izany ny zavatra tokana hataontsika raha ampandrosointsika mialoha ny fotoana izy ireo dia ny mandany fotoana be dia be maka tahaka azy ireo amin'ny iray hafa.
Mazava ho azy fa kapila mafy ivelany fa mafy fa tsy SSD ny fiasana mivantana amin'ny kapila ivelany dia mety maharitra ela Na dia mila famerenana kely aza ny zavatra tokony hataontsika nefa manery antsika ihany amin'ny farany hanondrana ny horonantsary rehetra, raha toa ka miara-miasa amin'ireo karazana rakitra ireo izahay. Raha etsy andaniny, miasa miaraka amin'ny sary indrindra isika, azontsika atao ny manitsy azy ireo tsy misy olana mivantana avy amin'ny kapila ivelany, na dia segondra vitsy fanampiny aza.
Fafao ny rindranasa izay tsy ampiasainay
Este dia ny ratsy endemika amin'ny rafitra fiasa rehetra. Mania amin'ny fisintomana rindranasa hanandrana hijery izay ataon'izy ireo rehefa mandeha ny fotoana dia mameno ny kapila mafy ataontsika amin'ireo rindranasa tsy misy ilana azy izay tsy ho ampiasainay intsony, satria ny antony lehibe fampidinana azy dia ny fanararaotana ny tolotra na ny hijerena raha mahasoa azy na tsia. ny tanjontsika.
Mba hanaovana izany dia mila manokatra fotsiny ny Launcher isika ary mankeny amin'izay misy ny kisary fampiharana. Avy eo isika dia tsy maintsy misintona azy io any amin'ny Trash mba hamafana azy amin'ny Mac. Na afaka manokatra ny Finder isika, misafidy ny folder Applications avy amin'ny tsanganana ankavanana ary hisintona ny rindranasa izay tianay hamafa amin'ny fako. Ilaina ity fomba ity raha te-hamafa ireo rindranasa izay nakarina avy hatrany avy amin'ny Mac App Store izahay, saingy tsy ilaina amin'ny rindranasa izay nakarinay tamin'ny internet.
Amin'ity tranga ity mila fampiharana izay mamela antsika hamafa izay fampiharana ato amin'ny Mac izahay, Fampiharana izay raha ny fitsipika dia tsy ao amin'ny Mac App Store fa tsy maintsy mankany amin'ireo mpamorona antoko fahatelo izahay. Ao amin'ny Mac App Store no ahitantsika ny rindranasa Dr. Cleaner izay ahafahantsika manaisotra ireo rindranasa ary tena tsotra ny fiasan'izy ireo, saingy indraindray tsy mandeha araka ny tokony ho izy izany. Ivelan'ny fampiharana Mac App Hafa AppZapper y AppCleaner izy ireo no manome ny vokatra tsara indrindra rehefa mamafa ny rindranasa.
Esory ireo fiteny efa napetraka
Toy ny fitsipika ankapobeny, mampiasa fiteny tokana amin'ny Mac-tsika, fa raha mila manova azy isika dia mametraka fiteny maro be i Apple raha toa ka mila manova ilay fiteny isika. Ireo fiteny ireo dia mibahana eo anelanelan'ny 3 sy 4 GB, toerana iray tena sarobidy izay raha tsy manana toerana amin'ny kapila mafy isika ary tsy misy fomba hanafahana toerana bebe kokoa amin'ny faritra hafa dia mety ho lasa tena sarobidy tokoa. Ho an'ity dia mila mampiasa ilay fangatahana izahay Manokana fiteny, fampiharana noforonina manokana hamafana ireo fiteny izay tsy ampiasainay ary tsy mikasa ny hampiasa azy io amin'ny ho avy isika ary amin'izay dia afaka mamerina fitahirizana GB vitsivitsy.
Inona no ataoko amin'ny toerana iasan'ny "Hafa" amin'ny Mac-ko?
Etsy ambony dia nodinihintsika ny safidy natolotry ny About this Mac fiasa izay anehoany amintsika ireo karazana rakitra izay ananantsika amin'ny kapila mangirana. Ilay mahatezitra indrindra antsika dia ilay antsoina hoe "Hafa" foana rehefa mitana ampahany tena lehibe amin'ny kapila mafy ataontsika. Ity fizarana ity dia misy ireo rakitra hafa izay tsy azo sokajiana ho fizarana. Toy ny fitsipika ankapobeny, ity fampirimana ity dia ahitana:
Ireo entana ao anaty lahatahiry OS X toy ny fampirimana System sy cache.
Fampahalalana manokana toy ny angona kalandrie, fifandraisana ary antontan-taratasy.
Fanitarana na modely fampiharana.
Ireo rakitra multimédia izay tsy afaka sokajian'ny motera fikarohana Spotlight ho toy ny misy azy ireo ao anaty fonosana.
Ireo rakitra rehetra izay tsy eken'ny Spotlight ny fanitarana azy.
Amin'ireto tranga ireto dia tena kely ny zavatra azontsika atao, satria matetika ireo rakitra ireo dia tsy hita ao amin'ireo lahatahiry ampiasantsika matetika. Raha irintsika ny toerana onenany dia tena zava-dehibe, tokony Diniho ny mety hamolavolana ny kapila mafy ary manaova fametrahana madio indray, tsy misy kopia voafafa afaka misintona ireo fisie voasokajy ho "Other"
Fakafakao ny haben'ny fisie ao anaty kapila mangitsokao
Indraindray ny olana mitahiry amin'ny kapila mangirana dia mety ho miharihary kokoa noho ny eritreretintsika. Mety manana rakitra isika, na inona na inona endrika, izay maka habaka bebe kokoa noho ny mahazatra, na fampirimana izay mampiahiahy mitazona gigabytes tsy mampino. Afaka mamakafaka ny atiny rehetra ao anaty kapila mangatsiaka misy antsika ary angamba mitadiava vahaolana haingana amin'ireo olantsika fitahirizana azontsika atao ny mampiasa Inventory kapila X, rindranasa iray izay handinika ny kapila mafy ataontsika izay mampiseho amintsika ny toerana iasan'ny fampirimana tsirairay mba hahafahantsika mahita haingana ny olana mety hitranga amin'ny habaka amin'ny kapila mafy ataontsika.
Mila manisa fotsiny ianao ny lahatahiry izay hitantsika ao anatin'ny fampirimana Users, izay toerana itahirizanay ny fampahalalana rehetra. Ny sisa amin'ny fisie Applications, Systems ... dia an'ny rafitra ary tsy tokony hiditra amin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra isika fandrao hiteraka tsy fahombiazana lehibe amin'ny rafitra izay manery antsika hamerina hametraka indray ny rafitra miasa.
Hamafana ny tantara fitetezana
Ny tantaram-pitetezana dia lahatsoratra fotsiny, tsy misy endrika, ka ny habe izay azony atao ao amin'ny Mac-tsika dia azo tsinontsinoavina. Ity safidy ity dia atoro anao raha manana olana isika rehefa manisy pejy ao anaty tranokala ary tsy azontsika aseho ny angona nohavaozina.
Hamafana ny cache an'ny browser izay ampiasainay
Tsy toy ny tantara fitetezana, ny cache dia afaka mitana ampahany lehibe amin'ny kapila mafy ataontsika, satria izy ireo dia rakitra manafaingana ny fandefasana ireo pejy izay matetika no dinihinay, hany ka tsy maintsy mampiditra ny angon-drakitra efa niova ianao, toy ny mahazatra ny lahatsoratra, fa tsy ny pejy iray manontolo, izay tehirizina ao amin'ny cache an'ny anay browser. Mba hanatanterahana an'io asa io haingana sy amin'ny mpitety rehetra dia afaka mampiasa fampiharana toa ny CleanMyMac isika, izay afaka segondra vitsy dia manafoana izay sisa tavela amin'ny cache an'ny mpanamory anay.
Hamafa ireo rakitra tsy maharitra
Ny rakitra vonjimaika dia iray amin'ireo zava-dratsy ateraky ny rafitra fiasa rehetra. Tsy misy rafitra miasa manome antsika ho azy ny rafitra mandeha ho azy dia natokana hamafana tsindraindray ireo karazana fisie izay ampiasainay ihany indray mandeha, indrindra rehefa manavao ny rafitra fiasa amin'ny kinova vaovao sy vaovao kokoa isika. Rehefa mandeha ny fotoana, ireto rakitra ireto dia mibahana ny habaka bara eo amin'ny Mac misy antsika ary amin'ny famafana azy ireo dia afaka mahazo habaka be ao amin'ny kapila mangirana isika.
Raha hamafana azy ireo dia afaka mampiasa rindranasa toa ny CleanMyMac, izay efa noresahintsika teo amin'ny teboka teo aloha isika ary mamela antsika hamafa ny cache sy ny tantaran'ny browser rehetra izay ampiasainay amin'ny Mac. Fampiasa iray hafa koa mamela antsika hamafa haingana ireo karazana fisie ireo dia ny Dr. Cleaner avy amin'ny mpanamboatra TREND Micro
Mitadiava rakitra mitovy dika mitovy
Indraindray isika dia azo inoana fa mampidina rakitra, sarimihetsika na mozika izay efa ao amin'ny Mac mihoatra ny indray mandeha isika ary mitahiry azy ireo amin'ny lahatahiry hafa, amin'ny finoana fa tsy nanana azy ireo tamin'ny kapila mangirana isika. Rehefa mandeha ny fotoana dia manaova rakitra izy ireo dia mety ho lasa nofy ratsy amin'ny kapila mafy ataontsika noho ny habe azon'izy ireo atao. Ao amin'ny Mac App Store dia afaka mahita rindranasa marobe izay mamela antsika hitady sy hamafa ireo rakitra tahiry hita ao amin'ny Mac-nay.
Zahao ny fampirimana fampidinana
Ny fampirimana fampidinana no toerana izay misy ny rakitra rehetra ampidinintsika avy amin'ny Internet, na amin'ny alàlan'ny fampiharana p2p na amin'ny alàlan'ny rindranasan-kafatra hafatra, mailaka na karazana hafa. Toy ny fitsipika ankapobeny, raha vao misintona ilay rakitra ilaintsika isika, dia matetika mamindra azy io any amin'ny fampirimana izay tiantsika hitahiry azy, na raha fampiharana izany dia apetratsika haingana. Amin'ity tranga ity dia tena azo inoana fa adinontsika any aoriana ny mamafa ny rindranasa izay alaina ary hanana toerana sarobidy ho an'ny kapila mafy ataontsika izy io.
Ataovy foana ny fako
Na dia toa tsy mitombina aza izany dia maro ireo mpampiasa manadino ny fako, io toerana io no andefasantsika ny rakitra rehetra tianay esorina tanteraka amin'ny kapila mangirana. Nefa tena tsy nesorina izy ireo mandra-panafoananay azy manontolo Ka rehefa avy nanadio tanteraka ireo fisie tsy misy ilana azy avy amin'ny kapila mangirana isika dia tsara ny manafoana azy tanteraka raha toa ka tena te-hijery izay habaka sisa tavela amin'ny kapila mafy ataontsika isika raha sanatria tsy maintsy manohy manadio isika na Nahazo toerana ampy ahafahana miverina milamina hiasa miaraka amin'ny Mac tsy misy olana amin'ny habakabaka na fampisehoana.
Manova kapila mafy
Na dia toa vahaolana tsy mitombina aza izany, raha toa ka lasa kely ny kapila ataontsika amin'ny fiovana voalohany dia tokony hieritreritra ny hanitatra ny toerana fitahirizany isika. Ny filamatra dia ovay ho an'ny SSD izay manome anay haingam-panoratra sy haingam-pandeha haingana kokoa noho ny kapila mafy 7.200 rpm. Ny vidin'ireny kapila mafy ireny dia nihena be tato ho ato ary afaka mahita 500 GB amin'ny 100 euro mahery isika izao.
Fa raha toa kely ireo 500 GB ireo ary manam-bola handaniam-bola amin'ny SSD SSD 1 na 2 izahay, lafo kokoa ireo maodely ireo noho ny kapila mafy nentim-paharazana, afaka manao fampiasam-bola lehibe isika mba hanamorana ny asa sy hanitarana ny fitehirizana. Fa raha tsy mampientanentana loatra ny toekarentsika, tsy maintsy hampiasa vola 500 GB isika ary mividiana drive ivelany ny fahaizantsika ilaintsika, mba hananantsika tanana eo foana ny rakitra rehetra izay tsy maintsy dinihintsika indraindray, fa tsy maintsy manana azy ireo amin'ny tsindry totozy isika. Ho fanampin'izany, io singa io ihany dia azo ampiasaina hanaovana kopia amin'ny Time Machine ary mamono vorona roa miaraka amin'ny vato iray isika.
Tantano ny fitehirizana amin'ny alàlan'ny macOS Sierra
Iray amin'ireo zava-baovao nentin'ny macOS Sierra antsika, ankoatry ny fanovana ny anaran'ny OS X ho macOS, dia ny manager manager, izay mamela antsika afaka segondra vitsy zahao izay karazana rakitra azontsika esorina noho ny taonany, ny antony tsy ampiasainay azy ireo, satria duplate izy ireo... Ity safidy ity amin'ny teôria dia tena tsara fa toy ny rindranasa hafa izay mampanantena ny hanao toy izany koa, tokony hitandrina tsara amin'izy ireo ianao ary tsy hatoky azy ireo tanteraka, satria afaka manadio amin'ny fomba feno habibiana amin'ny kapila mafy misy anao nefa tsy aseho antsika izay karazana rakitra dia mikasa ny hamafana hahazoana toerana fanampiny amin'ny kapila mafy ataontsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Torohevitra hanamafisana ny habaka kapilao amin'ny Mac
Hofafako ny horonan-tsariko rehetra miditra amin'ny antontan-taratasy rehetra, na izany aza rehefa manamarina ny fitahirizako ny kapila boot aho dia hita fa mbola manohy mitazona ny habaka rehetra ananako izy ireo, aiza no misy azy ireo na ahoana no fomba hamafana azy ireo amin'ny kapila boot
Mamaly an'i mariana
Raquelsmm dia hoy izy:
Ny zavatra mitovy amiko ihany no mitranga amiko, nofafako ny horonan-tsary rehetra avy amin'ny fampiharana PHOTOS izay sahala amin'ny 900 zavatra, ary mbola zara raha teo ambanin'izay nibahana azy. avy eo tadidiko ny app iPhoto izay mbola napetrako ary tao aho nanana sary sy horonan-tsary be dia be, nofafako avy teo ary avy eo tao amin'ny fako iPhoto ary taorian'ny fako avy teo amin'ny seranana. ary efa misy malalaka, nefa na eo aza izany dia manohy mitazona ahy izay bebe kokoa izy ireo ary tsy manome ny tenany ho endrika intsony. Nofafako ihany koa ireo horonantsary avy tao amin'ny folder dropbox an'ny google drive. Lany hevitra aho.
jereo raha afaka manampy antsika izy ireo.
Valiny tamin'i Raquelsmm
Nofafako ny tranokala sy ny rindranasa rehetra izay azoko eritreretina fa afaka mitahiry horonantsary izay efa nampiasako teo aloha toa ny sary, iPhoto, dropbox, googledrive, ... kanefa na izany aza dia mbola manana GB maro ihany aho mitazona ny fahatsiarovana ny kapila fanombohana .
Misy afaka manampy ahy ve ???
Salama, napetrakao ao amin'ny mac pro i Sierra… Nampiakatra rakitra iray ho an'ny iCloud aho ary namafa rakitra iray avy amin'ny mac izay mila mandefa programa… Manandrana misintona azy indray aho nefa milaza amiko fa tsy manana aho habaka kapila…
Efa narahiko ny dingana rehetra ary nofafaiko ireo programa sy sary avy amin'ny mac saingy mbola manana ny olan'ny habaka aho ...
Toy izany koa no mahazo ahy amin'ny lohahevitr'ireo horonantsary, tsy manana aho ary milaza fa manana 20GB eo ho eo aho. Inona no vahaolana amin'izany?
Apple dia manomboka mandray mpiasa ho an'ny Apple Store faha-XNUMX any Japon